Saadaalinta jiilaalka 2017 iyo 2018 goorma ayuu bilaabmayaa jiilaalka? | Saadaasha Shabakadda
Jiilaalku sidee ahaan doonaa?
Jiilaalku waa xilli inta badan aan la xiriirno qabow, muuqaal baraf leh, qabow, cayaaraha barafka. Laakiin waxay umuuqataa in tartiib tartiib dayrtu u dheeraynayso, in markaa maalmo yar ka dib ay yimaadaan kuwaas oo heerkulkoodu hooseeyo la diiwaangeliyey, laakiin in yar ka dib ay dhaafayaan isla markaana gu’gu soo noqonayo. Aaway, haddaba, waa maxay qabowgaas naga dhigay mar kasta oo aan waddada u baxno? Xitaa waxaad moodaa in mowjadaha qabow ee aan hada haysano aysan sidii hore ahayn.
Qormadan waxaan ku eegaynaa sida jiilaalkii 2017 u ahaa, iyo sida ay noqon karto sanadaha soo socda. Goorma ayuu qabowgu soo galayaa? Aan aragno.
1 Goorma ayuu qabowgu soo galayaa?
2 Soo Koobid Jiilaal 2017
3 Soo koobista xilliga qaboobaha 2016
4 Sidee ayuu noqon doonaa jiilaalka 2018? Iyo kuwa soo socda?
Goorma ayuu qabowgu soo galayaa?
¿Marka jiilaalku bilaabmo? Jiilaalku waa xilli ay filayaan dad badani. Ka dib xagaaga aadka u kulul, waxaad badanaa dooneysaa in bilaha ugu qabow ee sanadka ay yimaadaan sida ugu dhakhsaha badan. In kasta oo ay noo keeni karaan jirrada aan caadiga ahayn, sida ifilada ama hargabka, xilligan oo kale waxaan runtii dooneynaa inaan u baxno jidadka ama baadiyaha oo aan ku raaxeysanno cayaaraha xilliga qaboobaha.
Laakiin waa goorma xilliga qaboobaha? Waa hagaag waxay ku xirnaan doontaa cayn kasta meeraha meeraha aad ku sugan tahay 🙂. Sidaa darteed, haddii aad ku sugan tahay woqooyiga woqooyi, maalinta ugu horreysa ee rasmiga ah waa Diseembar 20 ama 21, halka haddii aad ku sugan tahay koonfuurta koonfureed, maalintaas waa Juun 20 ama 21.
Soo Koobid Jiilaal 2017
Sida laga soo xigtay xogta ee Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka (AEMET) xilliga qaboobaha ee 2017 wuxuu lahaa dabeecad diiran oo qallalan. Celceliska heerkulka wuxuu ahaa 8,5ºC, taasoo 0,6ºC ka badan celceliska xilligan, iyadoo qaadatay 1981-2010 oo ah xilligii tixraaca. Waxay ahayd jiilaalkii seddex iyo tobnaad ee ugu kululaa tan iyo 1965, iyo kii afraad ee ugu kululaa tan iyo bilowgii qarniga 2015aad, oo ka dambeeya 16-2000, 01-2007 iyo 08-XNUMX.
Way diiwaangeliyeen anomalies kaamerada wanaagsan kudhowaad + 1ºC ee Galicia, Catalonia, Jasiiradaha Balearic, Bulshada Valencian, iyo sidoo kale nidaamka Cantabrian, Iberian iyo Central, koonfur-bari ee Castilla-La Mancha iyo koonfur-galbeed ee Castilla y León. Dalka intiisa kale, cilladaha ayaa ahaa kuwo xun, inta udhaxeysa 0 iyo -1ºC.
Haddii aan ka hadalno roobka, guud ahaan wuu qallalay, iyadoo celcelis ahaan roobabku 20% ka yar yihiin sidii caadiga ahayd, oo ah 160mm. Diisambar iyo Janaayo way qallaleen, laakiin degaannada koonfur-bari ee jasiiradda iyo jasiiradaha Balearic aad bey ugu qoyan yihiin. Jasiiradaha Canary, Extremadura iyo bartamaha Andalusiya waxay ahayd mid qalalan ama aad u qalalan.
Soo koobista xilliga qaboobaha 2016
Jiilaalka 2016 wuxuu bilaabmay 22 Disember 2015, wuxuuna dhammaaday 20 Maarso. Waxay ahayd dhowr bilood oo xiiso leh, taas oo diiwaanka ayaa la duubay, roobka iyo heerkulka labadaba.
Marka loo eego saadaasha AEMET, waxaa la filayey in waqooyiga qeybteeda gacanka in ay ka di'i doonaan wax ka badan intii caadiga ahayd, iyo in dalka intiisa kale roobabku ay ku sii jiri doonaan xadka caadiga ah; Si kale haddii loo dhigo, haddii aysan inta badan roob ka di'in deegaankaaga, sannadkan sidoo kale ma jiri doonaan isbeddello waaweyn. Sidaas ayay ahayd.
Horeba Janaayo 11, 2016 waxaan kahadleynay a duufaan xoog leh oo dhibaato ku haysay waqooyiga oo dhan, gaar ahaan Pontevedra, Lugo iyo A Coruña. Maalmo roobabku ma aysan joojin daadadka, daadadka wadooyinka waxayna sababaan dhul go, gooyooyin gaadiid iyo xitaa wabiyada oo buux dhaafiya. Bishan celceliska roobku wuxuu ahaa 90mm, 41% ka badan intii caadiga ahayd (63mm).
Bishii Febraayo waxaa na soo wajahay duufaan kale, oo leh mowjado ilaa 11,95km ah iyo dabaylo duufaan xoog leh wata, oo ilaa 170km / h waqooyiga ah. Markan, gobollada ugu badan ee ay saameysay waxay ahaayeen San Sebastián, marka lagu daro Galicia. Laakiin roobabku si xoog leh ayey uga da'een waqooyiga. Bishan waxay ahayd mid aad u qoyan guud ahaan, iyadoo celcelis ahaan roobku uu ahaa 88mm (qiimaha 66% ka sarreeya midka caadiga ah, oo ah 53mm).
Socdaal roobabku waxay ku sii jireen qiimayaasha caadiga ah, marka laga reebo jibbaarada koonfur-bari ee jasiiradda iyo jasiiradaha Balearic, oo ka hooseeyay.
Sida laga soo xigtay AEMET, halkaasoo ay roob ka da'ayaan in ka badan intii la filayay, waxay ahaan lahayd meesha meerkuriga ku jira heer-kulku ku sii jiri doono qiimayaasha caadiga ah; halkii, bulshada inteeda kale waxaa macquul ah inay helaan 55% jiilaal ka diiran sidii caadiga ahayd. Xaq u helay
Inta badan haa. Bishii Janaayo celceliska heer kulku wuxuu ahaa 9.5ºC (2,3ºC in kabadan sida caadiga ah, waxay qaadatay 1981-2010 inay tahay tixraac), sidaas awgeed noqoshada ugu diirran tan iyo 1961. Qeybta waqooyi-bari ee gacanka iyo qaybo ka mid ah koonfurta, cimilada kuleylka ayaa xoogaa ka hooseysay, 1ºC.
Bishii Febraayo, qeybta bari ee gacanka, Jasiiradaha Balearic iyo qaybo ka mid ah jasiiradaha Canary, heer kulka ayaa u dhexeeyey 0,5 iyo 2,5ºC ka sareeya (muddada tixraaca: 1981-2010). Spain inteeda kale, qiimayaashu waxay ahayeen kuwo caadi ah ama waxyar ka hooseeya, gaar ahaan meelaha buuraha ah ee Buuraha Cantabrian, Sierra Morena, Sistema Central iyo Sistema Béltico. Heerkulka ugu sarreeya wuxuu ka sarreeyay 0,2ºC, heerkulka ugu yarna 1,2ºC ayuu ka sarreeyaa sidii caadiga ahayd, sidaas oscillation kaamerada diurnal ayaa ka hooseeyay waxa ay noqon laheyd.
Bishii Maarso, heerkulka ayaa sii waday inuu ka sarreeyo qiimaha caadiga ah, gaar ahaan qeybta bari ee dalka, oo ay ku jiraan jasiiradaha Balearic, quadrant-ka koonfur-galbeed iyo jasiiradaha Canary. Quadrant waqooyi-galbeed ma jirin wax isbeddel ah oo weyn.
Sidee ayuu noqon doonaa jiilaalka 2018? Iyo kuwa soo socda?
In kasta oo maanta (Julaay 11, 2017) wali xoogaa hore loo socdo in la ogaado xilliga qaboobaha soo socda noqon doono, waxay u badan tahay inay la mid tahay ama aad ugu egtahay wixii aan soo marnay, oo leh heerkul celcelis ahaan ah 8-9ºC, laakiin ilaa taariikhuhu isu soo dhowaadaan oo moodooyinka saadaashu soo bixi waayaan, way adkaan doontaa in si yar oo hubaal ah loo ogaado.
Iyadoo lagu xisaabtamayo in, sida saadaashu tahay, sanadka 2016 uu noqon doono kii ugu diiranaa taariikhda, xitaa inuu dhaafo 2015, iyo intaas ifafaalaha El Niño wuxuu ka caawin doonaa meerkurida heerkulbeegyada inay sii socdaan, celceliska heerkulka ayaa laga yaabaa inuu gaaro 1,14ºC. Taas macnaheedu waxa weeye waxaan yeelan doonaa jiilaal taas oo noqon doonta sii kululaanaya oo qalalaya, gaar ahaan gobolka Mediterranean.
Si kastaba ha noqotee, El Niño wuxuu sii ahaanayaa mid firfircoon inta udhaxeysa 8 iyo 10 bilood, sidaa darteed haddii saameynteeda ay bilaabato in la ogaado Nofeembar 2015, waxay u badan tahay (lama hubo) in bisha Sebtember 2016 aan tagi doono waji dhexdhexaad ah. Laakiin tani macnaheedu maaha in heerkulka diiwaanka aan la fileynin, tan iyo kuleylka adduunka waa dhacdo aan joogsan dooninHaddii aan si dhab ah loo qaadin tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu yareynayo sii deynta gaasaska wasakheynta ah ee hawada ku jira, sidoo kale bani'aadamku ma joojin doono wasakheynta meeraha maalin ilaa maalin kale. Oo weliba sidaas, 10.000 sano weli waa inay u gudubto meeraha inuu soo kabsado.
Marka, laga yaabee inaan ku dhammeysano inaan wada yeelano Kirismas aad u qalalan, gaar ahaanna diirran, hoostiisa cirka buluug ah oo yeelan doona fiirsashada sare ee gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo, sida kaarboon laba ogsaydhka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Jiilaalku sidee ahaan doonaa?
76 faallooyin, ka tag taada
WAA MUHIIM IN BARNAAMIJYADU IN AY KA OGAADAAN Goorma? JIILAALKA AYAA GALAY
SI LOO HESHIIYO QAARKA
Jawaab Cumar Sanches
Beeraleyda, iyo sidoo kale kuwa jecel jardiinada, waxay u baahan yihiin inay ogaadaan cimilada aaggooda si ay u ogaadaan waxa ay kori karaan. Iyada oo kuleylkaan caalamiga ah, tani waa sii kordheysa oo aan la saadaalin karin.
isbedelka cimilada ma kordhin kartaa roobabka Spain?
Ku jawaab eduard lopez
Waa salaaman tahay Eduard.
Taas bedelkeeda soo horjeedka, way yarayn karaan. Xaqiiqdii, badda Mediterranean, tusaale ahaan, waxay horeyba u yareeyeen 27% waxaana la filayaa inay sii wadaan inay hoos u dhacaan. Maqaal ayaa lagu daabacay joornaalka Nature oo ku saabsan sida qaabka roobabku u beddeli doono isbeddelka cimilada darteed. Ma yahay tan.
Monica, waxaan ka soo qaatay weedhahan maqaalkaaga: «... kuleylka adduunka waa ifafaale aan istaageynin, ilaa aan si dhab ah loo qaadin tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu yareynayo sii deynta gaasaska wasakheynta ah ee hawada ku jira, sidoo kalena aadanuhu sidoo kale in la joojiyo wasakheynta meeraha maalin ilaa maalinta xigta. Hadana sidaas oo ay tahay, wali waxay qaadaneysaa 10.000 oo sano in meeraha uu soo kabsado…. ».
Markaad tidhaahdo, dhamaadka aduunka ayaa soo dhawaanaya maxaa yeelay indha la'aanta hogaamiyaasha aduunku ma joojinayso qiiqa gaaska wasakhaysan celceliska heer kulka caalamkuna wuu sii kordhayaa wuuna kordhayaa ilaa aan si macno ahaan ah loo shiilino. Badduhu way baabi'i doonaan oo nolosha dhulka ayaa noqon doonta mid aan macquul ahayn. Waxaad sidoo kale xaqiijineysaa in kiiska mala-awaalka ah ee bina-aadamku joojiyay ku sii deynta gaasaska wasakhaysan hawada, waxay qaadan doontaa 10.000 sano inay mar labaad ku soo kabato.
Ma aqaano haddii aad xaqiiqsatay baaxadda odhaahdaada laakiin waa inay baqdin geliyaan qof walba. Waxaan rajeynayaa in shacabka aysan ka nixin hadaladaada.
Ku jawaab Satu
Kaliya waxaad dhahdaa iyadoo loo eegayo aqoonta yar iyo sida jiilaalkii hore iyo kuleylka xagaagan xagaagan qabow noqon doono gobolada qaarna waxaan ku arki doonaa baraf
Waxay u badan tahay inay fiican tahay, haa. Waan arki doonaa.
Dhammaantiin waa la iibiyay oo waa beenaalayaal, wax badan oo diirimaadka adduunka ah laakiin waxba lagama sheego khiyaanooyinka. Goorma ayaad joojin doontaa inaad dadka dareento inay dambi leeyihiin oo aad cambaareyso dowladahaada….
Kani waa shabakad saadaasha hawada ee maaha siyaasad.
Waxaan layaabi lahaa hadii jiilaalkani aad u qabowyahay, in kabadan maxaa yeelay waxaan haysanaa in yar oo aad ufudud ... oo waa qabow iyo yaraan qabow, aakhirka waxaan noqon doonnaa badda Mediterranean-ka
Waad salaaman tahay MTT.
Celceliska heerkulka Isbaanishka ayay u badan tahay inuu xoogaa sare u kaco, laakiin waan arki doonaa.
Ha wax ka beddelin cimilada oo waxaad arki doontaa inay roobab badani di'i doonaan
Dabcan, hadaanan wasakheyn, cimilada aad bey uga duwanaan laheyd. Salaan Luis.
Waxaan rajeynayaa inay aad u qabow tahay Andalusia oo had iyo jeer qorax leh oo waxaan horeyba uga daalay kuleylka badan ee qabow
Waa salaaman tahay Debora.
Ma sugi kartid xagaaga inuu dhammaado, haah? heh heh Waxaan rajeyneynaa inay qabow tahay ugu yaraan.
Sannadka 2016 wuxuu noqonayaa xagaagii ugu kululaa taariikhda? Hagaag, ma noqoneyso, sanadkii 2015 waxaan halkaan ku dilnay Murcia laakiin sanadkaan xitaa uma dhawa sanadkii hore, isagoo qaadanaya maalmo dabacsan oo heer kulkeedu sarreeyo, laakiin wixii aan halkan ku baran jirnay xagaaga, xitaa ma aqaan ma ogaatay.
Ku jawaab nani
Qodobbo badan xitaa way ka qabowdahay tii hore, waa run. Meesha aan ku noolahay (Mallorca), xagaaga sidoo kale waa qabow, xitaa waxaan soo wada qaadannay dhowr habeen bilaa taageere. Laakiin celceliska heerkulka meeraha ayaa sii kordhaya.
Waad salaaman tahay Monica oo ka socota Mallorca, gabi ahaanba waad saxantahay, xagaaga ayaa khafiif ahaa laakiin geedaha ayaa harraad u dhimanaya!
Waa loo wada naxaa
Ku jawaab Miquel Vidal Barceló
Hadday run tahay. Ficil ahaan wax roob ah ma da’in, dhibcaha yar ee dhacayna isla markiiba wey uumi baxeen. Aynu rajaynno inay roob da'ayaan hadda deyrta.
su'aal ma qabow baa jiilaalkan? ka badan tii hore?
hello su'aal jiilaalkan ma ka qabow doonaa kii hore?
Miyay u badan tahay in barafka jiilaalka ee Madrid? (Sababtoo ah waxay noqon doontaa mid qabow)
Ma jiraan fursado badan oo sanadkaan baraf ku daadi kara Madrid? (Waxaan rajaynayaa SNOW), waxaan u idhi maxaa yeelay sidaad u tidhi way qaboobi kartaa ... Waxaan rajaynayaa SNOW hahahahaha
Jiilaalkan sidee ahaan doonaa Dallas Tx?
Suurtagal maaha in la ogaado hubaal waqtiga ay noqon doonto 3-4 bilood. Waxa la ogyahay ayaa ah in hadii ifafaalaha La Niña la hawlgaliyo, Waqooyiga Ameerika qabow noqon doono. Xaqiiqdii, magaalooyinka sida New York waxaa jiri kara daadad baraf badan.
Isbaanishka, lama oga sida dhacdadani u saameyn doonto, haddii la hawlgeliyo. Laakiin waxa caadiga ah (ama wixii caadiga ahaa) ayaa ah in jiilaal diiran ka dib mid qabow ama mid aad u qabow yimaado, gaar ahaan haddii heerkulka xagaaga uu gaarayo ama ka yar yahay qiyamka caadiga ah sidii uu ahaa oo uu yahay sannadkan.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aan waxbadan ka ogaano, waan kula soo socodsiin doonaa
Salaan, aad u wanaagsan, sidee baan ahay Sandra waxaanan aad u xiiseynayaa mowduuca jiilaalka ee aan ku noolahay Barcelona waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay cusub tahay iyo in kale? Ama haddii ugu yaraan ay baraf ka badan sidii caadiga ahayd xilligan waxaan haysannaa roob ka badan inta caadiga ah habkaas ha u welwelin haddii aadan si sax ah u helin maadaama cimiladu ay aad u adag tahay, salaan
Jawaab Sandra Naharro Gómez
Suurtagal maaha in la ogaado waxa cimiladu noqon doonto, ugu yaraan waa hubaal.
Waa inaan sugnaa oo aan aragnaa haddii ifafaalaha La Niña la hawlgeliyey, oo aan aragno haddii Isbaanishka aan ka ogaanno iyo in kale.
Mabda 'ahaan, waxaan ka shakisanahay in barafku ka dilo sidii caadiga ahayd bariga gacanka iyo jasiiradaha Balearic. Dabaylo xoog leh ayaa laga doonayaa inay ka yimaadaan Waqooyiga (Siberia, tusaale ahaan) si aan ugu qabowno badda Dhexe, taas oo loo yaqaan qabow, taas oo ah, heerkul ka yar -4ºC ayaa la duubay.
Eeg, jiilaalkaan wuu qabownaan karaa, jiilaalkii hore wey diirneyd inkasta oo, hawo qabow ay yimaadeen oo ay baraf ka da'day heerka badda, laakiin ma ahan sidii sanadkii 2015 waxaan ku noolahay magaalo ku taal Aragon oo 150 mitir u jirta heerka badda waana leeyahay arkay baraf culus 16 jirkeyga oo aan haysto ..
Waxay in badan ka hadlaan kulaylka adduunka laakiin ma dhahaan waxaan ku jirnaa da 'yar oo baraf ah. Jiilaalku marba marka ka dambaysa wuu sii qabowsanaanayaa, siiba Waqooyiga Ameerika iyo Yurub iyo Aasiya ...
Laakiin maxaad leedahay Victor.
Ma ogid ... waad xun tahay
Ku jawaab Grijander
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii roobab badan di'i doonaan xilliga qaboobaha. Aad baad u mahadsantahay
Mabda 'ahaan waxaan dhihi lahaa haa, laakiin ma ogaan kartid hubaal. Waxay ku xirnaan doontaa qaybta dalka aad ku nooshahay, joogga, dabaysha, iwm.
Waan ku wargelin doonaa 🙂.
Waa salaaman tahay, waxaan ka imid Torre Pacheco oo ka tirsan gobolka Murcia waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay roobab caadi u da'ayaan. Iyo haddii heerkulka ka hooseeya celceliska lagu qoro jawiga xilliga qaboobaha. Oo weliba waxaan rabay inaan ogaado haddii dhicitaankani suuragalnimada muuqaalka dhibic qabow laga baqo DANA ay sarreyso, mahadsanid.
Nasiib darrose, ma ogaan kartid hubaal.
Waxay u egtahay inay cusubtahay, iyo in qiyamka roobka ee caadiga ama xoogaa sare laga diiwaan gelin doono dalka, laakiin wax intaa ka badan lama sheegi karo ilaa waqti inagu dhaafayo.
Waan la socodsiin doonaa.
Waa maxay saadaasha deyrta ee aad ka leedahay jasiiradda koonfur-galbeed? Huelva Seville Cadiz iyo Badajoz
Waa salaaman tahay, waxaan ka baqayaa oo iga adkaaday arrinta abaarta iyo isbeddelka cimilada, waxaan ka imid magaalo ku taal Sierra de Huelva, Aroche waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii roob la heli doono dayrta soo socota, haddii ay noqonayso jiilaal caadi ah ama waa inaan bilowno Salaan ka timid magaaladan quruxda badan ee Huelva.
Waa salaaman tahay, waa maxay xilliga qaboobaha ee laga filayo Sierra Nevada, waagii hore waxay ahaayeen kuwo si diiran u diirran, ma ahan kuwa soo socda =========
Subax wanaagsan, sidee jiilaalku uga jiri doonaa Navarre? Roob ma ka di’i doonaa kii hore? Waxaan rajeyneynaa inay sidaas noqon doonto
Salaan Waxaan ku noolahay magaalada Sagunto, oo ah magaalo ku taal Valencia. Aad AYAAN U DAALAY kuleylkan sanadihii ugu dambeeyay iyo autumns-jiilaalka Chichinabo. Qabow iyo roob midna. Ugu badnaan qoyaan qoyan oo dhex gala lafaha. In ay i geliyeen khaanadda dhagar qabayaasha, aad baan ugu faraxsanahay! Waan ka xanuunsanayaa jidadka kiimikada xun ee roobka gooya marka ay jiraan daruuro madow oo roob da'aya (indhahayga ayaan ku arkay) aad ayaan u daalay una murugooday gaar ahaan jiilalka cusub 🙁
Waad salaaman tahay, waxaan ka imid magaalo ku taal Aragon gaar ahaan Almonacid de la Sierra waxaanan ka walwalayaa wax ka badan isbedelka cimilada. Roobabku way sii yaraanayaan, sannadkan waxaa jira abaar xun, ilihii way qallaleen, dalaggiina waa qallalay. Waxaan xasuustaa markii aan yaraa in roob aad u badan uu hadda ka da’ay, oo uu da’ayay wax ka badan hadda. Waxa aanan garanayn waa in haddii jawigaas dhallinyaranimadaydu ahayd qaanuunka ama laga reebo. Ma doonayo inaan wax ka weydiiyo saadaasha deyrta maxaa yeelay waxaan aad u jeclahay sheygan saadaasha hawada oo aan aad ula yaabay sida ay u adag tahay marka la sameynayo saadaasha muddada-dheer. Tin roobaadka adag. Waxaan jeclahay inay roob da'ayaan Salaan.
Jawaab Miguel Angel Sánchez lamuela
Waad salaaman tahay, Nofeembar waxaan sameyn doonaa Camino de Santiago, Faransiiska, suurtagal ma tahay in la ogaado waqtiga ay ku taal waqooyiga Spain bisha Nofeembar?
Waad salaaman tihiin, waxaan ka imid magaalo ku taal Valencia qiyaastii 20 km. Laga soo bilaabo xeebta and ..iyo haddii aan maqlay baabi'inta ama ka hortagga roobka ama ka fogaanshaha duufaanka. Ma aqaan illaa iyo inta ay run tahay iyo haddii ay tahay anigu garan maayo macnaha ay u samaynayaan .... Aad baad u mahadsan tihiin
Sidee jiilaalku ugu jiri doonaa jasiiradaha Canary, gaar ahaan jasiiradaha galbeedka. Mahadsanid Monica
Jawaab francisco javier perez armas
Waxay noqon kartaa mid ka qabow tan kor ku xusan guud ahaan dalka, oo roob badan ayaa u badan haddii La Niña uu bilowdo. Laakiin ma ogaan kartid hubaal.
Subax wanaagsan, Valencia xilliga jiilaalka waxaan yeelan doonnaa - 3o 4 darajo, miyey barafoobi doontaa liinta?
Jawaab Salvador Segui
Waa salaaman tahay Salvador.
Ma ogaan kartid hubaal. Waxa aan kuu sheegi karo ayaa ah iyada oo ku xidhan midhaha liinta, sida liinta ama liinta, waxay si fiican u qabtaan qabowga fudud ilaa -4ºC.
Waxaan si fiican u xasuustaa in tve1 dhamaadkii jiilaalka ee la soo dhaafay ay faallo ka bixiyeen mid ka mid ah warbixinada saadaasha hawada ee ay siiyeen taas oo ah sida aanan ogeyn tusaalooyinka ay wadeen, jiilaalkaan soo socda ayaa ka badnaan doona kii hore, taas oo ah, jiilaalkan soo socda ayaa la mid noqon doona ama xitaa ka kulul ……… .. Waxaan rajeynayaa inay khaldan yihiin
Ku jawaab suaoker gaizto
Aan rajeyno. Laakiin waan arki doonaa waxa dhaca.
Waa salaaman tahay Mrs: Mónica sanchez Waxaan kaliya rabaa in aan waydiiyo hadii sanadkaan uu baraf noqon doono cida ay tahay gobolka Lagunera
Kaliya waxaan rabay inaan weydiiyo 🙂
Salaan! Mrs. Monica, waan ku faraxsanahay in dhowr qof ay xiiseeyaan cimilada, sidoo kale waxaan xiiseynayaa ku noolaanshaha Tijuana Baja California Norte waana mid aad ugu qalalan kuleylka, roob yar, dhowr sano ma uusan soo di'in sidii hore oo xagaagan wuu ka kacay heerkulka caadiga ah. Waxaan rajeyneynaa inuu roob da’o maxaa yeelay biyo ayaa loo baahan yahay. Salaan.
Waad salaaman tahay Marwo Monica, su'aashayda culus waxay noqon doontaa xagaagan badweyntayada reer Peru miyaa roob di'i doonaa ama maya
Waad salaaman tihiin, sidee yahay xilliga qaboobaha dayrta ee gobolka 'cadiz'?
Habeen wanaagsan Waxaan ku heysanaa duufaan xoog leh magaalada Barcelona oo leh qalab koronto oo fara badan, oo magaalada dhexdeeda taagnaa ugu yaraan 5 saacadood oo sii socota. Runtu waxay tahay in la qadariyo ka dib Sebtember aad u kulul oo qalalan, oo leh diiwaanno heerkulka ah, in kasta oo xaqiiqda ah in xagaaga guud ahaan uusan aad u kululayn.
Jiilaalka soo socda? Yaa og.
Way cadahay in inbadan iyo in kabadan laga ogyahay cilmiga cilmiga cimilada, oo hada ay lasocoto agabyada aan ku hayno shabakada, marka lagu daro macluumaadka joogtada ah Kama joojinayno inaan aragno moodooyinka cimilada oo leh saadaalino wakhti kasta, xitaa waxaa jira moodooyin cimilo oo calaamadeeya isbeddellada 9 bilood ka hor, oo leh isbeddelada dhammaan nidaamka jawiga 6 saacadood kasta.
Laakiin waxaas oo dhami wax dammaanad kama qaadayaan, xaqiiqdii waxay inaga caawinaysaa oo keliya inaan ogaano ama sii saadaalinno wax badan oo ku saabsan isbeddelka cimilada ee meeraheenna, kombiyuutarada super ee aan barnaamij ka sameynay. Laakiin cimilada dhulku waxay leedahay wax ka badan saadaasha tirada oo ku saleysan xogta la soo uruuriyay waqti aad u gaaban Isbedelka Cimilada haa dabcan. Laakiin waa in Dhulku ku jiray isbadal cimilo joogto ah 4.500 milyan oo sano.
Run badan. Isbedelka cimilada maahan dhacdo ugub ah, waa qeyb ka mid ah meeraha meeraha.
Laakiin hadda, mahadsanid tiknoolajiyada, wasakheynta iyo baahida loo qabo in lagu duulo meelaha yar ee cagaaran ee aan ka tagnay, bani'aadamku waxay awood u leeyihiin inay beddelaan cimilada.
Taasi waa sax, oo weligeed taariikhda meeraheenna ma yeelan isirka aadanaha ee isbeddelka cimilada. Waxaan saamayn ku yeelanaynay cimilada in ka badan qarni, aadna loo dardargeliyay tobannaan sano ee la soo dhaafay.
Isku-darka aadanaha ee leh arrimo dabiici ah sida cunugga-Gabdhaha cunsuriyada ama wareegyada qorraxda iyo kuwo kale oo badan, ayaa mustaqbalkeenna dhow ee cimilada ka dhigaya mid aan la sii saadaalin karin, in ka badan sidii horeba waa dabiici.
Aragtiyo badan ayaa furan oo ka gudba gees ka gees dhinaca kale, laga soo bilaabo xilligii barafka illaa cimilada lamadegaanka. Laakiin waxa cad ayaa ah in cunsuriyada bini aadamku had iyo jeer tahay mid taban, wasakheynta Planet lafteeda (Kan kaliya ee aan hayno) Cimilada, Badaha, Dhulka, wax waliba waa wasakhoobeen.
Waxaynu nahay belaayo, kuwa ugu caqliga badan ama aan sidaa u badnayn, Bulshadu ma joojin karto, waynu badan nahay, kolba marka ka dambaysa iyo in ka sii badan iyo in ka badan ayaa la cunayaa. Dhulkeenu ma koriyo, wuu sii yaraanayaa wuuna sii yaraanayaa. Waxaa jira saadaalino qiyaasaya in sanadka 2050 aan noqoneyno 12.500 milyan oo qof. Hadda waxaan ka weynahay 7.000 oo 1900 waxaan ahayn kaliya 1.600 milyan. Meeraha lama sii wadi karo, bulshada ayaa burburaysa.
Waa inaan waxbadan bedelnaa waxaanan ka baqayaa inaysan dhicin. Dano gaar ah oo aad u badan.
Waxaan kugula talinayaa Ultimatum to Earth.
Isbedelka Cimilada waa ifafaale keeni kara duufaanno baraf ah, xilliga xagaaga oo aad u kulul sannad walbana ay barato, mowjado qabow xilliga qaboobaha oo awood badan, taasoo ka dhigi lahayd baraf baraf ku dhaca Isbaanishka oo ka xoog badan oo ka fursado badan heerka badda, heerkul hooseeya xilliga jiilaalka, waadna ogtahay duufaanno, kuwaas oo Isbayn ka dhici kara awood sida kuwa Barcelona, ​​marka hawo badan oo qabow gasho jawiga, waxay keentaa xasillooni darro, marka lagu daro baddu waa kulul tahay ...
Haddii ifafaalaha La Niña uu sababo dabaylaha SW In Penisual Ibérica, miyaa la heli doonaa roobab xilliga qaboobaha halkii baraf laga heli lahaa meelaha sare ee Pyrenees?
Waa salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii heer kulku uu ku sii degi doono gobolka Ciudad Real iyo haddii ay roobab badani di'i doonaan. Tan iyo maalmahan wax badan ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay waa wax laga xishoodo in buuraha la dhex maro oo la arko geedo qallalan.
Nabadeey Monica :) Hal su'aal, waxaan xasaasiyad ku qabaa kuleylka iyo iftiinka. Waxaan ku noolahay Turis magaalada Valencia sanad walbana waa mid aan loo dulqaadan karin. Kaliya qoyaankaas oo lafaha dilaaca oo cuna guryaha iyagoo daxalaya.Xitaa haddii aysan udhowayn badda.
Waan xanuunsaday oo sidaas awgeed xasaasiyadda xasaasiyadu waxay xaqiijisay inay ku jirto qorraxda maalintii oo dhan. Halkan xagaagii wuxuu ku dhammaaday 31-ka New York sannadkan inaan ugu baxnay joojyeyaal iyo 27 digrii oo waxay ku billaabatay 7-dii Febraayo 20 darajo oo sii kordheysay. Marka laga reebo maalmo yar oo dabacsan oo ku dhacay dhabar jab. Su’aashaydu waxay tahay.
Waxaan arkaa saadaasha Cantabrian ama xitaa dayrta ayaa durba timid.
Marka waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii isbeddelka cimilada uu kaliya saameynayo aagga badda Mediterranean-ka inta soo hartayna aan sidaa u badneyn iyo in? Halkan waxaan la joognaa galbeedka. Shalay. Laakiin cidina ma jirto saadaal kasta oo saas tiri. Taasi waa caadi? Sababtoo ah halkan roob kuma da'ayo oo waxay ahayd xilli xagaa iyo badhna halkaas ma sii jiraan. Maxay tahay isbeddelka aan si weyn u saamayn iyaga iyo haddii ay roob leeyihiin? Valencia waxay noqoneysaa Isbaanishka Isbaanishka. Laga soo bilaabo exo ku taal Los Angeles waxaa jira aag la yiraahdo Valencia oo ku yaal Santa Clarita mana da'in roob tan iyo markii ay xitaa garan waayaan ... Waxayna u bilaabatay sidii akiin cidla ah oo tartiib tartiib ah. Haddii ay aki waxyeelleeyaan wax badan, maxaa badda Mediterranean uga bilaabmi weyneyno inaan beerinno geedaha x qof sidii ay bilaabeen inay halkaas ku qabtaan? Aagga Afrika waxaay isugu yeertaa waqooyiga inay dib u soo nooleeyaan si joogto ah dadka deggan magaalooyinka sidoo kale waxay waraabiyaan dalagyadooda yar waxayna sidoo kale ka walwalaan geedaha si aysan u lumin cimiladaas. Waad ku mahadsantahay dareenkaaga. Salaan ka timid Maria 🙂
Isbedelka cimiladu wuxuu saameeyaa meeraha oo dhan, laakiin haa, waxaa jira gobollo ay saamaynta ugu badan ku yeelatay. Xaqiiqdii, balooggan waxaan ka faalloonay in cimilada Isbaanishku ay si isa soo taraysa ugu ekaan karto tan Morocco.
Maxay qaarkood durba u bilaabeen dayrta kuwa kalena wali ula qabaan heer kulka xagaaga? Hagaag, si cimiladu u noqoto mid ama dhinac kale, dhowr arrimood waa inay soo farageliyaan: goobta, ororaafka, joog ka sarreeya heerka badda, heerkulka badda, dabaysha, shucaaca qorraxda, iwm.
Caadi ahaan, markay duufaan ka soo gasho woqooyi ama waqooyi-galbeed jasiiradda, waxay gaashaa badda Mediterranean-ka iyadoo aad u duugan, gaar ahaanna xagga koonfurta, maxaa yeelay goobahan, markay ugu dhow yihiin dhulbaraha, falaadhaha qorraxda ayaa ka toosan, sidaa darteed badda Badweynta Mediterranean-ka had iyo jeer way ka diirran tahay, tusaale ahaan, badda Galician.
Ku saabsan su'aashaadii ugu dambeysay. Hagaag ma aqaano waxaan kuu sheego. Waxaan jeclaan lahaa in geedo lagu beero dhammaan magaalooyinka iyo magaalooyinka, oo aan in badan la xaalufin. Waxyaabaha hubaal way fiicnaan lahaayeen.
Khubarada saadaasha hawada ee Px kuma dhiirato inay cambaareeyaan hal mar iyo dhammaan jahwareerka joogtada ah ee aan ku soo bandhignay sanado iyada oo ujeedadu tahay, iyo kuwo kale, oo ah in laga takhaluso roobka iyada oo loo marayo kala firdhinta iodide lacag, kuwa naga mid ah kuwa xiiqda qaba iyo Waxaan kasii daraynaa oo xasaasiyad ka sii dareyn la'nahay biyo la'aanta oo aan wada leenahay
Waa run in cimiladu is beddeleyso, marwalba sidaas ayey sameysay, in ninku saameyn ku yeesho way iska cadahay. Hadda oo 100% isbeddelka cimilada uu yahay anthropogenic, iyo in la yareeyo qiiqa waxaan awood u leenahay inaan xakameyno isbedelka la sheegay, waa wax aad u fiican. Marka masuulka ugu muhiimsan cimilada ay tahay qorraxda. Maxaa jira si loo sii daayo gaasas yar? haa More cusbooneysiin karaa? haa. Waxyaabo badan badala? cad. Laakiin ma lihin awooddaas aan ku maareyn karno cimilada, waxaana door bidaa inaanan noolaan markii ay nooshahay.
By habka, CO2 ma aha gaas wasakhaynaya, yeynaan si qaldan u sheegin. Waa gaaska nolosha, kan nafaqeeya dhirta. Inay leedahay saameyn cimilo ayaa ah wax kale.
Jawaab Antígono Carjedonio
CO2 maaha gaas wasakhaynaya sida Nox, Co… waa gaas lagu koriyo.
Ku jawaab Kilian
Ma baraf buuxi doonaa sanadkan Soria?
Waad ku mahadsantahay Monica faahfaahintaada iyo dadaalkaaga, waxaan nahay bini aadam waxaan culeysnay meeraha waxaanna guraneynaa wixii aan beeranay… Waxaan kaligey noolahay, aniga iyo shirkadaheyga ugu fiican, bisadaheyga, guri iyo dab. iftiimi goobta dabka lagu shito, sanadkan waxay i siineysaa inay halkaas ku jiri doonto weel aan u sharraxay xagaaga ... Bisaduhuna waa aqoonyahano saadaasha hawada sare ... had iyo jeer waxay isu diyaariyaan xilliga qaboobaha, laakiin waxay ahaayeen dhowr sano oo aan aad u arko iyaga. Qabowgu ma daneeyo. Salaan ka timid buuraha.
Waad salaaman tahay sanadka 2017 waxaan heli doonaa jiilaal ka badan inta aan ku jirno mahadsanid
Sidee qabow u noqon doonaa sanadka 2017 laakiin waxa aan ku jirno Mahadsanid
waaye saadaal fiican
Waa salaaman tahay, goorma ayuu jiilaalku bilaabmi doonaa? Kimtrails-ka dulliga ah iyo wasakhda dhulkeena jecel waxaan jeclahay qabowga qabow sanadka oo dhan ...
Ku jawaab Locario
Waad salaaman tahay Locario.
Wax badan uma hadhin. Bilowga Oktoobar, heer kulka ayaa la filayaa inuu bilaabo inuu hoos ugu dhaco Spain.
Ha walwelin, wax walba way yimaadaan. 🙂
Maaha isku mid: yeelasho, awood, inaad awood u yeelato.
Maxaa la yeelayaa, in AWOOD la yeesho
Aad bay u fududahay in la ogaado haddii roob da’ayo iyo in kale.
Cirka haduu buluug yahay roob ma da'o
Hadday buluug tahay oo daruuraha soo muuqdaan, waa inaad fiirisaa oo keliya, haddii waxyaabaha foosha xun ay bilaabaan inay cirka sii maraan, ugumana jeedo qandaraasyada yar-yar ee ay reebeen diyaaradaha ganacsiga ee baaba'aya inta ay diyaaraddu socoto, laakiin qandaraasyo dhaadheer oo furmaya iyo daruur khafiif ah ayaa samaysanaysa ,,,,, sagootiya roobka.
Haddii aad aragto inay daruuro jiraan oo ay roob ku dhow dahay waxaadna arki kartaa dariiqyadaas inta u dhexeysa kuwa cad iyo kuwa cad, oo aan ogahay inaad ii sheegi doontid, uumiga, hubaal in daruurahaas biyaha ah ay baabi'i doonaan. markale roob la’aan.
Haddii ay tahay in laga saaro daruuraha, iodide lacag ah, haddii ay tahay in kor loo qaado heerkulka aagga, aluminium.
Waxaa la yaab leh, dhaqankani waa mid muuqda tan iyo markii Castilla la Mancha ay u bedeshay beero abuurkeeda, waxay ku dhacday vinalopó halka aan ka imid, iyo xitaa ururada beeraleyda, kuwa xoolaha, iyo ilaaliyaha bulshada ee Murcia, Alicante, Valencia, Rioja, Balearic Islands. dhaqanka.
Marka la fiiriyo waxa laga sheegayo CO2, waxaa jirtay waqti uu dhulku u yimid in uu ku raaxeysto ku dhowaad 100% oksijiin, (oo u dhinta dhammaan noolaha tiro badan), xilligaas heerkulka meeraha ayaa aad u kacay, oo sababay dab weyn. Wax waligood ma koraan intaas ka dib. Waxaa loo yaqaan Saxaraha, tusaale ahaan. ama lamadegaanka, waqtiyada xaddi badan oo CO2, hawdka waaweyn.
Maan rumaysan. Laakiin waa inaad cirka eegto.
Ku jawaab Yggdra
Waxaan u maleynayaa in saadaasha AMT ee 2017
way ka dhawrsan yihiin sanadkaan la soo dhaafay.
Uma baahnid inaad farahaaga qabsato, caadi ahaan waa caadi.
Burritos! Kahor intaadan u qaadanin caqiidada weyn ee ay ku soo rogtay caalamiyeynta, iska diiwaan geli!
Aragtida been abuurka ah ee kuleylka Dunida! Weligeed waxay ahayd been abuur! Waa wax laga xumaado!
Adigu waad iskaa u oggolaanaysaa in laguu adeegsado, wax fikir ah kama lihid!
Runta marwalba waa la ogaa, saynisyahano daacad ah ayaa had iyo jeer xaqiijiya. Wakiilka koowaad ee wax ka beddela cimilada meerahan ayaa ah saameynta uu xiddiga ku hareeraysan ee uu ku meeraysto ku leeyahay maaddada magnet-ka.
Dhaqdhaqaaqa yar (uguyaraan) wareegyada qoraxda ayaa daciifiya berrinka, taas oo u oggolaanaysa falaadhaha cosmic-ka inay gaaraan lakabyada sare ee jawiga, iyagoo soo saaraya nitrogen oxides, wakiil sameeya daruur, bedelida iyo mugdiga hufnaanta jawiga, sidaas darteed qaboojinta, sanadka kadib sanadka, jawiga, dardargelinta diyaaradda-socodka iyo wax ka beddelka dhabbaha mawjadaha badda. Daciifinta magnetism-ka Dunida ayaa sidoo kale saameyn firfircoon ku leh qaxitaanka tectonic, taas oo ah, waxay kordhineysaa dhul-gariirka meeraha, iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa fulkaanaha.
Ifafaalaha yareynta daahfurnaanta cimilada ee ay keento dhaqdhaqaaqa qoraxda oo yar ayaa la arkay ilaa 2010. Waqti ku filan ayaa laga gudbay si looga gudbo kuleylka kuleylka ee bada ee xaalada cusub. Dhamaadka xilligii diiran ee dhawaa ayaa muuqda oo soo dhow. Cimilada ma sii ahaan doonto sidii ay ahayd qarnigii XNUMXaad. Taasi way dhammaatay.
Hada laga bilaabo, qaboojinta ayaa noqon doonta mid aan laga maarmi karin haddii, sida qorshuhu yahay, wareegyada xiga ee qoraxda ee minima ay dhacaan, si isdaba joog ah, taas oo ah 95% hubaal!
Xitaa waa macquul, inay ka dhigan tahay bilowga barafka xiga laftiisa, haddii mar haddii wareeggan qabowgu dhammaado, muddada aan ka yaraan doonin laba qarni, kan ugu dheer Holocene, rabitaanka daciifka ah ee wareegga Dunida dushiisa dhidibka uma oggolaanayo falaaraha qorraxda inay dhalaalaan barafka iyo barafka ku ururay dhulalka laliska sare, maxaa yeelay kuwani waxay aad ula mid yihiin dhulka dushiisa, dhulkuna wuxuu ku dhacayaa NUXURKA 100.000 SANO EE MALAHAN!
Jawaab JUAN ÁNGEL MORENO
Beenta wasakhda ah, waxaan ku noolaa Madrid 20 sano, cimiladuna waa mid cabsi badan, marka hore malaha gu ', laba ma jiro dayr, seddex midkoodna Mar horeba sanadkan 2018 ma jiro xagaa, waxaa jira xilli-gug been abuur ah, shit, dhowaan way noqon doontaa Iswiidhan ama mid ka mid ah waddammada gebi ahaanba la qaboojiyey, waxaad arki doontaa, in aanu jirin kululaan caalami ah, ay jirto qaboojin caalami ah; (
iyo shirqoollada oo dhan, Chemtrails iyo qaboojinta caalamiga ah, sida iska cad waxaan taageersanahay kuwa uga tagay hadhuudhkoodii ciidda dhinacyadan, waxa uu leeyahay Mr. Juan Angel Moreno, aad iyo aad, run, dib u akhri wuxuu leeyahay
Xagaagu wuu ka kululaan karaa sida caadiga ah Spain oo dhan